I-Oppo F11 Pro Avengers Edition, ushicilelo olulinganiselweyo lwabalandeli befilimu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Abaphindezeli sele benayo eyabo ifowuni, kwaye ikunye no-Oppo F11 Pro Avengers Edition
Eyona midlalo bhanyabhanya ibalaseleyo, inkulu kwaye inkulu kakhulu malunga nokuza kumabala emidlalo kwihlabathi liphela kwaye ngaphambi kokuba yenzeke, u-Oppo ubhengeze Ushicilelo olulinganiselweyo lwe I-F11 Pro Nge logo yakudala yale. Yeyiphi imovie esithetha ngayo? Ewe, ukusuka kwiAvengers: Endgame ', ewe!
Isixhobo sigcina amanqaku aso kunye neenkcukacha, kodwa inyani yokuba iza nomxholo weAvengers iya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba ithathe ingqalelo yabathengi abangaphezulu komnye ongakhange azame uphawu, konke ukuze babe neselfowuni ukuba bazive ngathi yi-Infinity Gauntlet GEMS ifakiwe.
1 I-Oppo F11 Pro Avengers Edition, iselfowuni eya kulwa ne-Thanos
1.1 Ukucaciswa kunye neempawu
I-Oppo F11 Pro Avengers Edition, iselfowuni eya kulwa ne-Thanos
I-Oppo F11 Pro Avengers Edition imixholo yebhokisi
Ukuphehlelelwa kweselfowuni yokuphindezela kuvela kumanyano olwenziwe yinkampani yaseTshayina neMarvel Studios. Ifowuni yinxalenye yokukhuthaza ukuba inkampani yefilimu iqhubeke ukukhuthaza umdla kwifilimu.
Okwangoku I-Oppo F11 Pro Avengers Edition ifumaneka ngokusemthethweni eMalaysia uku-oda kwangaphambili. Nangona kunjalo, iya kuphinda ifike kwezinye iimarike kungekudala, ezinje nge-India, apho izakufika khona njengoThor, uThixo weNdudumo, nge-26 ka-Epreli, ngomso. Apho iya kufumaneka ukuze ithengwe ngokukodwa Amazon.in.
Ukulandela iipateni zelogo yeAvengers, iselfowuni iza nethoni eluhlaza kunye nokugqitywa okucwebezelayo. Inika isiphumo sokutyikitywa kwe-Asia gradient ngokudibeneyo kunye neepateni ezintsonkothileyo ezinamacala amathandathu kunye nelogo ye-movie ebomvu.
Kuza nefayile ye- UCaptain America uphefumlele imeko yepensile enxibe ikhaka lakhe eliyimbonakalo, ukukhusela okongeziweyo kunye nokuqina. Esi sixhobo sangemva sinokusetyenziselwa ukubamba ifowuni, nokuba siyibambe okanye siyibeke ngokuthe tye kumphezulu ukuze ubukele iividiyo okanye uhambe kamnandi ngakumbi.
Ukunika umba ngakumbi i-cachet, ibhokisi esetiweyo yohlelo olukhethekileyo lwesixhobo ine-logo yokuphindezela yobushushu eprintiweyo kunye nebheji yomqokeleli.
Ekugqibeleni, Isiphelo iza ne-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi kwaye ixabiso layo li-1,399 ringsian ringitts (~ 303 euro). Ngoku iyafumaneka ngoku-odolwa kwangaphambili, njengoko sinokubona kakuhle, kwiwebhusayithi ye-Oppo kunye nakwiivenkile zomzimba zaseMalaysia. Nangona ingayi kuba kude kube ngoMeyi 3 ukuba iqhubeke ithengiswe ngokuqinisekileyo.
Ukucaciswa kunye neempawu
Ngaphandle kotshintsho olunxulumene noyilo lweF11 Pro, yonke enye into, ngokwee-specs, ihlala ifana, Njengoko besesitshilo. Ngendlela efanayo, sishwankathela kwakhona iimpawu zayo.
Khumbula ukuba i phakathi kuluhlu une I-6.5-intshi ediagonal i-FullHD + ukubonisa kwescreen esibonisa isisombululo seepikseli ezingama-2,340 x 1,080I-slim 19: umlinganiso we-9 ratio kunye ne-90.9% yesikrini-ukuya-emzimbeni ratio, eyenza ukuba ibe ntle kakhulu esandleni, ngaphandle kobungakanani bayo. Endaweni yenotshi, iza nekhamera ebuyisekayo egcina inzwa yekhamera yangaphambili, eyi-16 MP kunye neempawu zokugxila kugxilwe ku-f / 2.0.
Ngaphantsi kwe-hood, isixhobo sixhotyiswe yi-MediaTek eyaziwayo phakathi kwe-chipset, phakathi Helio P70, kunye nezipho ze Itekhnoloji yokunyusa Hyper, ethi ilungiselele ukusebenza kwefowuni ukubonelela ngamava omsebenzisi agudileyo nangakumbi.
Ukufika kwethu kwisebe lekhamera, sikhubekile kuseto lwekhamera ngasemva ezimbini eziqukethe Inzwa yokuqala ye-MP eyi-48 kunye ne-5 MP yesibini kunye ne-LEDkunye neMowudi yoBusuku be-Ultra ukufaka iifoto ezingcono kwiimeko eziphantsi zokukhanya kunye neminye imisebenzi esekwe kwi-AI.
Iinketho zonxibelelwano kwisixhobo zibandakanya inkxaso ye-Dual 4G VoLTE, i-dual-band 802.11 ac WiFi (2.4 GHz + 5 GHz), iBluetooth 4.2, GPS + GLONASS, kunye nezibuko le-microUSB. Ngokuphathelele kwisoftware, iOppo F11 Pro Avengers Edition nayo Isebenza kunye I-Android 9 Pie esekwe ColorOS 6. Ukongeza koku, ixhotywe ngokufunda ngomnwe ongasemva kwaye ixhotyiswe ngebhetri ye-4,000 mAh eza neyayo i-VOOC 3.0 yetekhnoloji yokukhawulezisa umenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abaphindezeli sele benayo eyabo ifowuni, kwaye ikunye no-Oppo F11 Pro Avengers Edition
Okungakumbi malunga neRedmi ene-Snapdragon 855: iinkcukacha zichaziwe